Ninka jahannamada | Apg29
kan akhri oo arag filimka si fiican u sameeyey oo ku saabsan sheekada Ciise ninkii hodanka ahaa iyo Laasaros. Sheekadu waa la barbardhigo lahayn. Waxaa dhacay.
Sidaas waxaa dhacay inuu miskiinkii dhintay, oo waxaa lagu malaa'igahu waxay u qaadeen laabtii Ibraahim. Markaasaa ninkii hodanka ahaana waa dhintay, oo waxaa lagu aasay. Iyo in cadaabta, halkaas oo uu ku jiray cadaab, ayuu indhihiisa kor u taagay oo fog ka arkay Ibraahim, iyo Laasaros oo kooxdiisa.
Waxaa jiri jiray nin hodan ah kuwaas oo dhar gududan oo jilicsan sidan maro iyo maalin kasta raaxaysi iyo raaxo ku noolaa. Oo weliba waxaa kaloo jiray nin miskiin Laasaros la odhan jiray, isagoo boogo miidhan leh jiifsaday albaabka, oo u rajeeyay in ay ka dhergin uu gaajo la siiyo jajabkii miiska ninkii hodanka ahaa ka dhacay. Oo weliba eeyaha u yimid oo boogihiisa leefleefi jireen.
Oo wuxuu ku qayliyey oo yidhi, Aabbe Ibraahimow, ii naxariiso, oo Laasaros ii soo dir inuu fartiisa caaraddeeda farta ku ah biyo ku tiinbiyo oo carrabkayga, waayo, aad baan ololkan ayaan ku silcayaa.
Markaasaa Ibraahim wuxuu ku yidhi, Wiil yahow, xusuuso in aad heshay wax wanaagsan aad, halka aad ahaayeen nool, oo sidaas oo Laasaros helay xun. Laakiinse haatan wuu ayaa lagu raaxaysiiyey, adiguse waad silcaysaa. Waxaas oo dhan weliba, waxaa jira bohol weyn oo qoto dheer inoo dhexeeya annaga iyo idinka, in kuwa doonaya in ay halkan ka soo idiin ma inaan halkaas oo ay midna qof ahaan ka jirto si ay u soo gudbeen noo awoodaan.
Markaasuu wuxuu ku yidhi: ka dibna waxaan Aabbahay aad weydiiso, oo aad isaga u dirtid gurigii aabbahay, waayo, shan walaalo ah Waxaan leeyahay, si uu uga dig iyaga laga yaabaa, waaba intaasoo iyaguna ay yimaadaan meeshan silaca leh. Ibraahim wuxuu isagii ku yidhi, Waxay leeyihiin Muuse iyo nebiyada. Iyaga, waxay dhagaysan.
Oo isna wuxuu yidhi, Maya, Aabbe Ibraahimow, laakiin haddii qof uu aado kuwii dhintay ka, way toobad keeni doonaan. Markaasaa Rabbigu wuxuu isagii ku yidhi, Haddii ay maqli waayaan Muuse iyo nebiyada, iyagoon la qanciyay xitaa haddii qof kuwii dhintay ka soo sara kaco.